ဘုန်းကျော်: Aug 23, 2009
“I don’t know why they [security guards] didn’t stop me,” Yettaw said inatelephone interview with Newsweek magazine. “The man with the AK-47 shook my hand and let me in.” “I don’t know why they [security guards] didn’t stop me,” Yettaw said inatelephone interview with Newsweek magazine. “The man with the AK-47 shook my hand and let me in.”
“I want to free Myanmar [Burma]. I want to stop the suffering there. I am anti-junta. I will never be at peace, emotionally or psychologically, until that woman is free, until that nation is free,” he said.
ယက်တော...ဒီအတိုင်းပြောတယ်...ဒါပေမဲ့..ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာက...ဒီလူဟာ..အမေရိကန်အစိုးရ..ခိုင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဆိုတာ..နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေသိတယ်။ အခု..အပြင်ရောက်မှ..ဘာ့ကြောင့်ဒီစကားတွေကို ပြောရတာလဲ..တရားရုံးမှာကော ဒီလိုထွက်ဆိုချက်တွေကို သူပြောဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူးလား...။
မြန်မာ့အတိုက်အခံတွေ..အမေရိကန်အစိုးရကိုပေါ်တင်မေးခွန်းထုတ်သင့်နေပြီ..။ ဒေါ်စုအိမ်ထဲဝင်တဲ့အမှုဟာ တစ်ကျပ်တန်ကို ၁၀၀၀ တန်အောင် စစ်အစိုးရလုပ်ပစ်လိုက်တယ်..။ တကယ်တန်းတော့ ယက်တောမကလို့..ဘာကောင်ဝင်ဝင်..ဘာမှ ရေးကြီးခွင်ကျယ်မလုပ်ရဘူး။ အဓိက လုံခြုံရေးညံ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ရိုးရိုးသားသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်..။
နောက်ဆုံးတော့ ပြင်ပလူတွေရဲ့အထင်ကတော့..စစ်အစိုးရဟာ ဒေါ်စုကိုလုံးဝ မလိုလားဘူးဆိုတာကို ထပ်ပြတာပဲ..။ ဒီလိုလုပ်ရက်တွေကြောင့်... စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကို အပျက်ချေမှုန်း..။ သို့မဟုတ်..ဒေါ်စု..ကိုစစ်အစိုးရက အသေသတ်။ အခုတော့အဖြူအမဲမကွဲဘူး။ နှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်..။ ဒေါ်စုရင်းမလား။ သန်းရွှေရင်းမလား။
အေး..ဒီလိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်..ဗမာလူမျိုးတွေအချင်းအချင်း...ပေါင်းပြီး..တိုင်းပြည်ကို ကမ္ဘာ့အလည်မှာ မျက်နှာမသေးရအောင် လုပ်ကြရတော့မယ်...။ ပြည်ပအတိုက်အခံ..။ ပြည်တွင်းအတိုက်အခံ..စတာတွေဟာ...ကျနော်တို့လူမျိုးတွေပါ..အားလုံးဟာ..ငပိမပါရင်..ထမင်းစားလို့..ရတဲ့..လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်တော့မှ..ထောပတ်ကို စားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ..ပြောချင်ပါတယ်....။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, August 23, 2009